iPhone 6 | Vaovao IPhone
iPhone 6, izay rehetra tadiavinay, lehibe kokoa sy matanjaka kokoa. Ny mahia indrindra indrindra noforonina tamin'ny 0,69cm ihany koa ny mahery indrindra. Fampisehoana Retina HD 4,7-inch miaraka amin'ny vahaolana 1334 × 750 teboka. Ankehitriny dia tonga amin'ny zokiny lahy, ny iPhone 6 Plus, miaraka amina endri-javatra mitovy fa efijery 5,5-inch fa tsy 4,7.
Un endrika vaovao boribory kokoa, miaraka amin'ny efijery somary miolaka eo amorony, fomba vaovao hametrahana ny antennas tsy mbola nisy toy izany teo aloha, ary izy rehetra miaraka amin'ireo loko 3 izay tena nahomby tamin'ny kinova teo aloha, volondavenona, volafotsy ary volamena.
Ao anatin'ny maritrano 64-bit, a processeur vaovao A8 miaraka amin'ny coprocessor an'ny hetsika M8. Ny zava-drehetra hahatonga ny fitaovana maherin'ny 50 heny mahery noho ny iPhone voalohany.
Ny fakan-tsariny dia tsy mihatsara firy amin'ny sary, mitazona ny 8MP fa manatsara ny sensor Fokus Pixel; dia amin'ny horonantsary omeny ny naoty miaraka amin'ny horonan-tsary 1080p ary hatramin'ny 240fps amin'ny firaketana mihetsika miadana.
Ny rehetra dia haingana, tsara kokoa ny zava-drehetra. Fifandraisana, hafainganam-pandeha WiFi, data, Touch ID, fandoavam-bola amin'ny finday, NFC, sensor barometrika vaovao ... ary rehetra miaraka amin'ny iOS 8, ny rafitra fikirakirana finday mandroso indrindra mandraka ankehitriny.
Ho avy ny iPhone 6 safidy fahaiza-manao telo, 16GB amin'ny 699 euro, avy eo mitsambikina ho 64GB ho an'ny 799 euro isika ary farany 128GB ho an'ny 899 euro.
Vaovao farany amin'ny iPhone 6
Jereo ny vaovao farany momba ilay iPhone 6 vaovao 4,7-inch.
Ny fiantsoana vondrona FaceTime dia tsy mandeha amin'ny iPhones sy iPad rehetra mifanaraka amin'ny iOS 12
Andro vitsy lasa izay, namoaka ny iOS 12.1 i Apple, fanavaozana izay nanolotra anay ny fahaizana manao antso ho zava-baovao ...
Niverina amidy any Azia ny iPhone 6GB 'vaovao' 32GB
Amin'ity tranga ity dia miatrika vaovao somary hafahafa isika ary bebe kokoa raha raisintsika ny kaonty ...
ny Pablo Aparicio hace 4 taona .
UPDATE: Apple Insider dia nilaza fa nifandray tamin'i Apple ary ireo tao Cupertino dia nandà izany tsaho izany. TO…
Ny fanenjehana hetsika ao an-dakilasy amin'ny olana amin'ny efijery iPhone 6 dia manangona haingana
Fotoana fohy taorian'ny namarotana ny iPhone 6 dia hita fa nakoroka "mora" ...
Hita ny horonantsary misy iPhone 4-inch vaovao. iPhone 6c: Ianao ve?.
Efa maro dia maro, hoy aho ny tsaho sy fampahalalana marobe izay nilaza taminay momba ny iPhone 4-inch….
Ny iPhone 6c dia hanana bateria sy RAM bebe kokoa noho ny 5c [RUMOR]
Andro tsaho. Raha vao lasa izay dia miresaka tsaho milaza amintsika indray momba ny iPhone mahatohitra isika ...
Unboxing ny iPhone 6 Smart Battery Case
Manoloana ny toe-javatra rehetra ary tsy misy tsaho mialoha, Apple dia gaga anay tamin'ny talata lasa teo tamin'ny fanombohana ny ...
Tsaho vaovao milaza fa ho tonga amin'ny lohataona ny "iPhone 6c"
Betsaka sy isan-karazany ny tsaho miresaka momba ny iPhone 6c, saingy ireo honohono ireo dia iray monja amin'ny ...